आहा ! कति सुन्दर त्यो गाउँ र बालापन
सुन्दा काल्पनिक कथा झै लागेपनि हरफहरू वास्तविकतासँगै त छाड म छाड गरेका भने पक्कै हुन । हुँदो हो हामी पाँच वर्ष माथिका बालबालिका थियौ होला । पूर्वी पहाडी जिला प्रायः विकट नै छन् । यसै सेरोफेरोमा हुर्कँदै गर्दा हामीसँग सहरी रमझम सुविधा र इच्छापुर्तिका अवश्य बस्तुहरू दिने बाबा आमासँग कुनै सामर्थ्य थिएन । न त हामीले कुनै बस्तु यो चाहियो त्यो चाहियो भन्ने आवश्यकता नै अनुभूति गर्दथ्यौ । समय सधैँ दुई मासमा चल्ने नै हो, बर्खा र हिउँद । बर्खामा खेती किसानी गर्ने प्रायः सबै गाउँका मानिसहरुनै आआफ्नो कामामा व्यस्त नै हुन्थे ।
पहाडी डाँडाकाँडा हरियाली कहिले बर्सात हुने कहिले पहारिलो घाम लाग्ने बर्सातपछि घाम लाग्दा सच्चिकै भूगोलको वास्तविकता झल्कनु नाैलो हुँदैनथ्यो। बारिमा छपक्कै कोदो फूल खेल्दै हुन्थ्यो भने बारिको डिलमा बोडिका लहरा लहराउँदै सेता हरिया काला विभिन्न रङ्गीबिरङ्गी कोसाहरूलाई पोस लगाउँदै हुन्थे कतै डिलहरूमा अम्बा पाक्दै र झर्दै हुन्थे त्यही अम्बाको वासना र फललाई आफ्नो आहारा बनाउँदै।कोकले,भमरा,न्याउरिमुसा,लगायत विभिन्न जातिका किटपतङ्ग हरूको मस्ती चलिरहन्थ्यो ।
यस्तो भान हुन्थ्यो कि सन्सारको समुर्ण सौदर्यता हाम्रै पहाडमा बर्सन्थ्यो। जुठेल्ना र घरका करेसाबारी बासका थाँक्रामा घिरौला त्यतिकै फलेका हुन्थे भने काँक्राका झ्याङहरूमा रोजाइ चल्थ्यो । यो खाने र त्यो खने भन्नेमा दिदी दाजुसँग झगडा नै हुन्थ्यो।आँगनका पेटीमा कोपिला हाल्दै गरेका सयपत्री, बाह्रै मास अथक रहने बाह्र मासे फूल कर्कलाको पातमा सप्त रङ्गी इन्द्रेणी लुकाउँदै हुन्थ्यो । टिकेफूल भने जीवितहरूलाई नै जीवन दिँदै हुन्थ्यो सन्जिबनी । सबैको वासनालाई भुलाउँदै हुन्थ्यो बाबरी फूल । यस्तै यस्तै सिलसिलाको बिचमा हुर्कन्थ्यौँ हामी ।
असार– साउनको झरिमा रुझ्दै खेत बारिमा हिलो छ्याप्ने धान रोप्ने मकै भाँच्ने कोदो रोप्ने अनेकन मौसमअनुसारका खेतीवालीमा रमाउँदै हुर्कन्थ्यौ हामी । सुन झैँ झपक्क पाकेको धान र बारिएको कोदो टिप्ने मौसम सुरुहुदा केही दिन कामको चटारो अभिभावकमा लाग्थ्यो भने हामीलाई भने अर्को मस्ती सुरु हुन्थ्यो । जब बालीनाली थन्क्याएर खेतवारि खाली हुन्थे तब साच्चिकै हाम्रो बालपनामा दसैको सुरुवात हुन्थ्यो ।
गाउँमा घरहरू टाढा टाढा भएपनी मन भने सधैँ नजिक हुने । हिउँदे बिदाको बेलामा हामी वल्लाे घर पल्लो घर तलमाथि वा निकै परसम्मका साथीभाइ भेला हुने गाइ बाख्रा चराउने, दिन कहिले सिम खेतमा त कहिले बारिमा, कहिले खरवारिमा कहिले खोलाको बगरमा जताततै खाली भएपछि गाइबाख्रालाई त्यति धेरै ध्यान दिनु नपर्ने हुँदा केटाकेटीको मौसम हुन्थ्यो खेलको ।
कुन्यूको सहारा लिएर खेलिने लुकिछुपी देखि परालको दाइँमा गुन्टिखेल्नु मियोमा बाँधिएका गोरुको पुच्छर समाउँदै दिनभर माइल माइलका फन्का लगाउनुको मज्जा भने बिछट्टै हुन्थ्यो । खोला खेतका ठुला ठुला गरामा हरेक दिन हुने डन्डिबियो खेलको मजासँगै जोखिम पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । यदि बियोले कसैलाई लागेको त्यसको तीखोभागले घाउ नै बनाइदिन्थ्यो ।
सबैका घरमा बा आमा दाजुका मोजाले निकै मार्केट लिने गथ्र्यो । मोजाको भित्र पुराना कपडा लगाएर फुटबल जस्तै आकार दिने र त्यसलाई खेलमा रूपान्तरण गर्ने हाम्रो नियमले घरका सबैको ठुलाका मोजाहरू हराउने गर्थे । यदि कथम कदाचित बा आमाले थाहा पाएमा दुई चार थप्पडको सामना अवश्य गर्नै पर्ने हुन्थ्यो ।
अलिकति घाम लागे गर्मी भए नजिकै रहेको खोला र खहरेका दहमा पौडने रमाइलो गर्ने खोलामा ढुङ्गा र स्याउलाको छेका बनाइ ठुला ठुला दह बनाउने ढुङ्गा र स्याउला बोकेर लखतरान हुने यो सिलसिला हरदिन चलिरहन्थ्यो ।
गुच्छा खेलमा विशेष एकदिनको कुरा हो । हामी साथीभाइ दहमा पौडिएर जिउ शीतल पारेपछि । गुच्छा खेल्न डाँडाको खलेगरामा भेला भयौ। यतिकैमा गाउँको एक जना दाइपनी आउनुभयो । वहाँले हामीसँगै गुच्छा खेल्ने कुरा गर्नुभयो । हामी डरायौँ । इन्कार गर्‍यौँ । तर केही बेर पछि वहाँले फकाउनु भयो । तर वा सँग गुच्छा चाहिँ थिएन । गुच्छा पनि हामीसँगै एक रुपैयाँको ६ दाना किन्नुभयो । केहीबेरको खेलपछि वहाँले सबै गुच्छा हार्नु भयो । त्यसपछि रिसाएर सबैका गुच्छा खोसेर मिल्काइदिनु भयो । हामी सबै जना बेस्सरी चिच्याउँदै रोयौँ । हाम्रो रुवाइले वहाँलाई केही असर गरेन । आफ्नो बाटो लाग्नुभयो । पीडा यस्तो भयोकी हामीले गुच्छा खेलेको र गुच्छा फ्याँकिदिएको कुरा घरमा आएर भन्न सकेनौँ । किनकि हामी सबै लुकेर गुच्छा खेल्नेगथ्र्यौ ।
यसरी बित्ने बालापनमा न त स्कुलको टेन्सन थियो,नत होमवर्कको । हामीलाई स्कुल जाँदै गर्दा कसैले बाटोमा नानीहरू पढ्न हिँडेको हो भनेर सोध्दा बल्ल थाहा हुन्थ्यो कि, ए हामी स्कुल होइन पढ्न गएका रहेछाँै ।
बिहान आठ बजे दाजु दिदी सँगै बुबाले दसैँमा किनिदिएको जिन्सको हाफपाइट र आकाशे रङ्गको सर्ट लगाउन पाउँदा एकदमै मजा आउँथ्यो । खुट्टामा चप्पल भने हुदैनथियो । खालि खुट्टा दुइघन्टाको पैदल हिडेपछी बल्ल स्कुल आइपुग्थ्यो । थाकल पाक्ने मौसममा थाकलका झ्याङमा लुकेर दिनभरि थाकलखाने बयर पाक्ने मौसममा बयरको बुट्टामै दिन सकिन्थ्यो । रात परेको पत्तो नपाउँदा कति पटक बा आमालाई आफ्नै साथीले पोल लगाइदिँदा पाएका एक दुई चड्कन सम्झँदा आज जीवनका स्मरणीय क्षण सकिएको भान हुन्छ । अझ सल्लिपिरमा चिप्ले टी खेल्दा बाबाले मुस्किलले किनिदिएको पाइन्छ प्वाल पर्दा होस या प्वाल परेको पाइन्ट आमाले अर्को पुरानो पाइन्टको टुक्रा काटेर टालिदेसी त्यही लगाएर स्कुल जाँदा साथीभाइले गिज्याएको कुरा स्मृतिमा रहिरहेका छन् ।
गाउँको सबैभन्दा पुच्छरमा हाम्रो घर थियो । घरदेखि जति जति उकालो लाग्यो त्यति त्यति नै साथीहरू थपिँदै जान्थे । माथि डाँडासम्म पुग्दा पन्ध्र बीस जनाको लर्को हुन्थ्यो । यसबिचमा पनि कतै बरपिपलको चौतारी आएमा साथी पर्खने निउमा हातका किताब बिसाइ वरी चालु हुने चुङ्गी खेल एक स्मरणयोग्य छ ।
स्कुल पुगेपछी जब क्लास रोममा पसिन्छ । हामी टाढा गाउँ देखी स्कुल जानेको बेन्च भने प्रायः सधैँ अन्तिममा हुनेगथ्र्यो । झुक्किएर अगाडिको सिट खालिभएपनी हामी त्यो सिटमा बस्तैनथियौँ ।
किनकि अगाडिको सिटमा बस्नेको होमवर्क हेर्ने सरले सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर भन्नुपर्ने भएर नै हामी अन्तिम बेन्च रोज्दथ्यौँ । सधैँ अन्तिम बेन्चमा बस्ने भएकाले सरले पढाएको राम्रोसँग बुझिँदैनथ्यो । यसो हुनाले हामी सरले दिएको होमवर्कमा पनि ध्यान दिँदैनथ्यौ । त्यही भएर होला अगाडिको बेन्च खाली हुँदाहुँदै पनि अन्तिम बेन्च नै रोज्ने गथ्र्यो ।
शनिवार सधैजसो बजार लाग्ने गथ्र्यो पैसाको गर्जो टार्नु परे आमा बजार जानुहुन्थ्यो। आमालाई पछ्याउँदै जाने बानी बसिसकेको ले कहिलेकाहीँ जान नपाउँदा रोइकराई गर्दैभएपनी बजार जाने र आफ्नो सामान कति बेला बिक्छ भनी कुर्ने अनि पैसा हातपरेपछी फेरि आमालाई कन्कन गर्ने बानी थियो। तर अपेक्षा भने ठुलो थिएन लेकदेखि बेच्न ल्याएको उसिनेको स्कुस धेरै मन पथ्र्यो आमाले आठआनामा किनिदिएको स्कुस हातमा बोकेर आदि बाटो सम्म आइन्थ्यो। हेरेरै अगाउने बच्पना अब फर्केर आउँदैन सत्य हो।
एकपटह तेर्सो बाटोमा अगाडि हिँडिरहेको साथीको चप्पल टेक्दा उसको चप्पलको फित्ता चुँडियो उसले चुटिएको चप्पल हातमा बोकेर गयो । उ निकै नै रोयो । साँझ घरमा आउँदा उसले बा आमालाई कुरा लगायो । तल्लो घर र माथिल्लो घरमा मैले गरेको उट्पट्याङले गर्दा झगडा भयो । पछि आमाले उसलाई उस्तै चप्पल किनिदिनुभयो । तर म भने खालिखुट्टानै स्कुल जान्थेँ ।
यावत कुराहरू हामीले आफ्नो जन्मभूमिसँग उपहारको रूपमा प्राप्त गरेथ्यौँ जस्तो लाग्छ । हरेक कुरालाई नजिकैबाट वा छोएर, अनि भोगेर अनुभव गर्न पाउँदा हामी आफूलाई सच्चीकै भाग्यमानी महसुस गर्दछौ । हामीले बालापनमा पाउने सुख सुविधा पाएनौ होला । तर ती उकाली, ओराली, भिर, दोबाटा, धारा, पँधेरा, घुम्ती, मोड, खेतबारी,जङ्गल, गाई बाख्रा, सबैमा प्रकृतिले एक अनौठो सौदन्र्य भरेको छ । एउटा सिङ्गो पाठ्यक्रम बुनिदिएको छ । आजभोलि सहरमुखी बालबालिकहरु हामीले छोएर अनुभव गरेका प्राकृतिक बस्तुलाई किताबका पन्नामा बनाइएका रङ्गीचङ्गी चित्रमा हेर्ने, नाम कण्ठ गर्ने र किताबी रचना हेरेर बाबा यस्तोपन छ कहाँ छ ? भन्ने सम्मको वातावरण बन्दै गरेको छ ।
आजभोलि गाउँ आफैसँग यो मजा खोसिएको छ । सुखभोग सोच र सुबिधाभोगी आकाङ्क्षाले गर्दा गाउँहरू खाली छन् । खेत बारीहरू बाँझै छन् । कालो बन मारा र उन्युले खेतबारीमा राज गर्छ । पहिलेको जस्तै हराभरा र सुन्दर गाउँ फेरि हुन्छन् कि हुँदैनन् ? हामी गाउँ फर्केर बाझो खेत खन जोत गर्छौँ कि गर्दैनौ ? सुख्खा र निरस कान्लाहरूमा अब हरियाली झ्याङहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
सहरमा सिमेन्ट र इँटका दिवालहरू छन् । हर घरमा कम्पाउन्ड छन् । त्यहाँदेखि बाहिर निस्कन केटाकेटीहरूलाई बन्देज छ । निस्के पनि दुर्घटना हुने जोखिम छ । स्कुल जान हिँड्न पर्दैन घरमै गाडी लिन आउँछ । मान्छे भन्दा ज्यादा ठुलो किताबको भारी छ । त्यही भारीले जीवनको स्वर्णिम पल वाल्यपन त खोस्दै छैन ? यस्तै प्रश्नहरूले आजकाल डेरा जमाउन थालेको छ ।